Ọdịda analysis na ihe ngwọta maka engine nke mmanụ dizel generator setịpụrụ enweghị ike ịmalite
site ha na 21-04-20
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya enweghị ike ịmalite injin nke diesel genset. Tumadi na-esonụ isi ihe anọ: 1.malite usoro Failure Analysis A.Start batrị voltaji bụ obere, n'ezie ikike ezughị (na-egosi na voltaji dị ka kwalite asụsụ ọma voltaji) B.Start batrị USB na moto wiring njehie CS ..
Kedu ihe kpatara anwụrụ ọkụ na setị generator?
site ha na 21-04-14
Mkpụrụ mmanụ dizel nwere ike ịmịpụ anwụrụ ọkụ n'oge ọrụ. Colorsdị anwụrụ ọkụ dị iche iche na-anọchi anya mmejọ dị iche iche. Ọ bụrụ na anaghị edozi anwụrụ ọkụ nke diesel generator setịpụrụ, ọ nwere ike ibute ọdịda nke generator ma ọ bụ ọbụna ịmalite ịmalite. Ndị a bụ ụfọdụ ọnọdụ anwụrụ ọkụ ...
Nkwadebe maka ntinye echichi
1.Unit njikwa Na njikwa kwesịrị ị paya ntị na eweli eriri kwesịrị kegide ya n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, nghọta gwuo egwu. Mgbe ebugoro nkeji ahụ na ebe a na-aga, ekwesịrị itinye ya n'ụlọ nkwakọba ihe dịka o kwere mee. Ọ bụrụ na enweghị ụlọ nkwakọba ihe iji chekwaa n'èzí, t ...
Njikwa maka ịmepụta ụlọ na ibu ọrụ maka onye ọrụ
site ha na 21-03-19
Sistemụ njikwa maka ụlọ generator maka diesel 1. Nke mbụ, onye ọkụ eletrik ga-eji igwe na-ere ọkụ n'ụzọ ziri ezi dịka iwu ọrụ si arụ, rụọ ọrụ dị mma na ndozi nke igwe na-emekarị, mee ndekọ dị mma mgbe genst na-arụ ọrụ oge ọ bụla. 2.Chelee akụkụ nile nke generator, coolant, mmanụ ọkụ ...
General ihe ọmụma nke dizel generator set
Nkwadebe tupu unit amalite 1. Lelee na mmanụ larịị nke mmanu mmanu, larịị larịị na mmanụ ụgbọala dị n'ime ọgwụ ọnụ ọgụgụ akara na n'ime kenyere nso. 2, lelee mmanụ mmanụ dizel, mmanu mmanu, usoro dị jụụ nke pipeline na nkwonkwo ọ bụla ma enwere ...
Mbupu dị nro n'okpuru nduzi nke Covid-19
site ha na 21-02-25
Ihe Covid-19 ọhụrụ ahụ metụtara na 2020, ụlọ ọrụ dị iche iche atawo ahụhụ dị ukwuu, ọ ga-abụ nnukwu ebili oyi na akụ na ụba ụwa, azụmaahịa na ịntanetị na-eri. Isi ụlọ ọrụ ise dịka nri, njem, njem na ala na ụlọ, yanakwa ụlọ ahịa na-anọghị n'ịntanetị, ga-eche gị ihu ...
Ngosipụta 2020 China Bauma
Bauma China, Shanghai International Construction Machinery, Building Materials Machinery, Mining Machinery, Construction Vehicles and Equipment Expo, na-eme kwa afọ abụọ na Shanghai New International Expo Center. Bauma China bụ ọkachamara ngosi n'elu ikpo okwu na Asia maka ụlọ ọrụ nke co ...
E nyere ụlọ ọrụ anyị National Certificate of Enterprise Certificate Na Disemba 2, 2019.
site ha na 19-12-02
"Sayensị bụ ihe dị mkpa n'ime ụgbọ ịnyịnya maka mmepe, okwu ahụ bụ" ụlọ ọrụ teknụzụ ọhụrụ na nke elu "na-ezo aka na isi ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ọgụgụ isi nwere site na nyocha na mmepe na mgbanwe nke teknụzụ ac ...
Nabata Onye isi oche nke Timor Lest na ndị otu ya bịara ileta ụlọ ọrụ anyị
site ha na 19-09-10
Na Septemba 10, mgbe ememme Mid-Autumn na-eru nso, osote onye isi ala Timor Lest na ndị nnọchi anya ya gara ụlọ ọrụ anyị iji mụọ ọrụ nke ike CCHP kesara na ịkọ mmiri mmiri ma kelee ndị ọrụ anyị ekele ekele. ...
Na July 2017, anyị ụlọ ọrụ e ọdịda nke na-eduga Enterprise akwụkwọ nke Fujian Provincial Science and Technology Giant.
site ha na 17-07-01
Akwụkwọ a gosipụtara na ụlọ ọrụ anyị nwere ọrụ siri ike na njikwa, usoro ego dị mma, nkwụsi ike ahịa siri ike, usoro mkpali na-agbanwe agbanwe. Na arụmọrụ dị mma, nwere ikike mmepe na uru ịkụ ọkụ dị oke mkpa. Na usoro nyocha, developmentm ...
Companylọ ọrụ anyị meriri ịba uru ikike patent akwụkwọ maka ultra - nke dị jụụ na -emepụta jenerato
site ha na 16-03-09
Companylọ ọrụ anyị nwetara akwụkwọ ikike bara uru nke patent maka nke na-ewepụta ihe na-adị jụụ na March 9, 2016. Onye na-ere ọkụ na-eguzosi ike na-edozi ihe dị n'ime nke generator generator ka ụlọ ọrụ ahụ nwee ohere. O kwesịrị ekwesị maka smal ...
Anyị ụlọ ọrụ e ọdịda na ịba uru nlereanya patent akwụkwọ nke àjà ihe ọ ultraụ -ụ-jụụ dizel generator set
site ha na 15-06-17
Companylọ ọrụ anyị nwetara ikike ịba uru patent akwụkwọ nke ultra-jụụ diesel generator setịpụrụ na June 17th, 2015. Ultra-diesel genset a nwere ezigbo ihe nwere usoro dị n'ime ya na njiri mara mma nke ndị ọrụ, nke dị mma maka ndị ọrụ iji rụkwaa ma dochie uwe. ..
Ọdịda analysis na ihe ngwọta maka eng ...